कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति महिना RM १५०० प्राथमिक केन्द्रित हुनु पर्छ - मलेशिया अर्थशास्त्री - jagritikhabar.com
कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति महिना RM १५०० प्राथमिक केन्द्रित हुनु पर्छ – मलेशिया अर्थशास्त्री
सरकारले विदेशी कामदारको तुलनामा स्थानीय नागरिकका घरपरिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय कामदारका लागि RM १,५०० को नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।
अर्थशास्त्री प्रा इमेरिटस डा बर्जोयाई बर्दाईले आफ्नो आवश्यकता र जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकारले कसलाई लक्षित गर्ने भनेर अन्य विधि पनि बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
स्वदेशमा कामदार र विदेशी कामदारको जीवन फरक फरक भएकाले सरकारले श्रमिकका दुई समूहलाई सहयोग गर्न फरक–फरक ‘नियम’ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“यो न्यूनतम पारिश्रमिकको लक्ष्य के हो? मलेसियामा, अदक्ष क्षेत्रमा करिब १५ लाख मानिस काम गरिरहेका छन्। यो लाभान्वित हुने सम्भावना रहेको समूह हो। त्यसपछि त्यहाँ कारखाना सञ्चालकका रूपमा काम गर्ने थप १७ लाखदेखि १८ लाख कामदारहरू छन्। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक RM1,500 पाउनुहोस्। यी दुई समूहले फाइदा लिन सक्छन् (नयाँ न्यूनतम ज्याला)।
“वास्तवमा मलेसियामा काम गर्दा हामीले हाम्रो तलबलाई विदेशी कामदारको तलबसँग तुलना गर्न मिल्दैन। विदेशी कामदारले रु एक हजार तलब पाए पनि सित्तैमा आवास, कहिलेकाहीँ सित्तैमा खाना पनि पाउँछन् र उसको बस्ने खर्च पनि फरक हुन्छ। स्थानीय कामदारहरूबाट।
“यहाँ विदेशी कामदारहरू, तिनीहरूले मासिक 300 RM बाट पनि बाँच्न सक्छन् किनभने तिनीहरू आफ्नो देशमा पैसा पठाउन धेरै बचत गर्न चाहन्छन्। यसैबीच, स्थानीय कामदारहरू … RM 1,500 तलब बाँच्न धेरै पीडादायी कुरा हो। RM2,000 यदि यो RM2,500 छ भने, म बाँच्न सक्छु।
“मलाई लाग्छ कि हामीले कसलाई उनीहरूको जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने राम्रो तरिका हो र हामी उनीहरूलाई मद्दत गर्न अन्य तरिकाहरू प्रयोग गर्छौं,” उनले मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक शीर्षकको राष्ट्रिय प्राध्यापकको दिमाग टक शोमा प्यानलिस्ट हुँदा भने: अन्त के हो? प्रोफेसरहरूको राष्ट्रिय परिषद् आज अनलाइन द्वारा आयोजित।
बरजोयाईका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलाई सामाजिक सुरक्षा योजनासँग पनि जोड्नुपर्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) जस्ता योजनामा ​​अझै पनि योगदान नगर्ने स्थानीय कामदारहरू विशेष गरी अनौपचारिक कामदारसँग सम्बन्धित भएकाले जागिर गुमाउने जस्ता विभिन्न जोखिममा परेकाले यस्तो भएको उनले बताए।
“वास्तवमा हामीले यो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्न आवश्यक छ। हामी देख्छौं कि हामीसँग EPF बाहेक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली छैन। तर दुर्भाग्यवश EPF ले औपचारिक कर्मचारीहरूलाई मात्र खातामा लिन्छ।
“८.७ मिलियन कर्मचारीमध्ये ३३ प्रतिशत अनौपचारिक कर्मचारी हुन् जसले EPF मा योगदान गर्दैनन्। हामीले जे गरे पनि तिनीहरू वास्तवमा पर्यवेक्षक मात्र हुन्।
“यसलाई हामीले वास्तवमै ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूमध्ये धेरैलाई ‘नाजुक’ को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ किनभने उनीहरूले सजिलै आफ्नो जागिर गुमाउँछन्,” उनले भने।
यसैबीच, राष्ट्रिय प्राध्यापक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डाटुक डा रादुआन चे रोजले न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई राष्ट्रिय रणनीतिक मुद्दाका रूपमा सबै दलले उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
“यो बहुआयामिक भएकाले यसलाई गहिराइमा खोज्नुपर्छ। यो विषयलाई कार्यान्वयनको फाइदा वा बेफाइदाको पक्षबाट विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्छ,” सोही कार्यक्रमका प्यानल सदस्यसमेत रहेका उनले भने।